'Yayiqamba amanga' ngokuthunjwa abokufika intombazane yaseKZN | News24
'Yayiqamba amanga' ngokuthunjwa abokufika intombazane yaseKZN
Durban - Intombazane eneminyaka engu-18 ubudala eyathi yathunjwa ngabantu abazama ukuyidayisa ngaphambi kokuyithumela eMozambique, ibihubhuza amanga aluhlaza, kusho amaphoyisa.
Le ntombazane yaseVryheid eyanyamalala kubo izinsuku ezimbalwa ekuqaleni kwenyanga, isizoboshwa.
"Idokodo liphenyisiswe ngabaseshi baseVryheid, kwatholakala ukuthi izinsolo azisilo iqiniso," kusho okhulumela amaphoyisa uCaptain Nqobile Gwala ngoMsombuluko.
Le ntombazane yathi ibithunjwe abantu ababili abangaziwa phakathi kwaseVryheid naseNquthu, ivalelwe emzini othile kanye namanye amantombazane amahlanu.
OLUNYE UDABA:Kuthunjwe ingane umama eyobhala izivivinyo
Kodwa, ngemuva kokufika ekhaya, yatshela abazali bayo namaphoyisa ukuthi ikwazile ukweqa.
Yaze yanconywa nguNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi uWeziwe Thusi ngesibindi sayo nokucabanga ngokushesha ngaphansi kwesimo esinzima. Lokhu kwasindisa impilo yayo kanye neyamanye amantombazane, kusho uNgqongqoshe.
Kwaboshwa abantu ababili abadabuka e-Ethiopia abaneminyaka engu-20 nengu-27 ubudala ngemuva kwesitatimende sayo, kwavulwa necala lokushushumbisa abantu.
Umthombo utshele iDaily News ukuthi le ntombazane kusolwa ukuthi ibihlezi nesoka layo.
Amaphoyisa asefunge agomela ngokuqinisa isandla kubantu ababika amacala angamampunge.
"Sicela amalungu omphakathi akugweme ukuvula amacala angekho ngoba imibiko engasilo iqiniso ithikameza ukusebenza. Kuwukudlala ngesikhathi samaphoyisa okufanele engabe abhekana namacala abucayi."
Amaphoyisa awashongo noma labo ababoshwa sebededeliwe yini.
Okhulumela ihhovisi likaNgqongqoshe uVukani Mbhele, uthe kuyishwa okwenzekile.
"Amanga afana nalawa avamise ukuthatha kancane imizamo nomsebenzi omuhle esiwenzayo emacaleni angempela," kusho uMbhele.